Aqoonkaab Maxaa ku cusub taleefanada sumsung galaxy S8 iyo S8+ | Aqoonkaab
Maxaa ku cusub taleefanada sumsung galaxy S8 iyo S8+
Mar 31, 2017Technology
Shirkadda sumsung waxay soo bandhigtay taleefanada cusub ee sumsung galaxy s8 iyo s8+ , taleefanadan ayaa leh muuqaalo ka duwan kuwii ka horeeyey gaar ahaan cabirka shaashada , shaashadaha taleefanadan ayaa ah kuwa ugu wayn cabirkooduna kala yahay 5.8 inches iyo 6.2 inches .
taleefanadan cusub waxa ka maqan badhinka hoyga (Home Button ) oo caan ku ahaa taleefanada sumsung laakin waxay leeyihiin badhinkaas oo aan ka muuqan qalabka sare ee mobilka balse ka dhex dhisan nidaamka taleefanka.
labadan taleefan ba waxay leeyihiin dhinacyo xoodan sida ka muuqata sawirada hoose.
taleefan sumsung galaxy s8 wuu ka cabir shaashad wayn yahay iphone 7.
kamerada taleefanad wax badan lagama bedelin kii ka horeeyey ee s7 waana 12 megapixel laakin waxa isbedel lagu sameeyey bayteriga taleefadan kuwaas oo ah qaar la tijaabiyey maadaama shirkadan mobilkeedii note 7 oo dab ka qarxayay , taleefadan ayaa ah qaar kaydinka kara dabka muddo dheer .
waxa kale oo ku cusub taleefan nidaamka uu ku shaqaynayo oo wax ka bedel mug leh lagu sameeyey waxaana lagu soo daray barnaamijyo cusub sida BIXBY DIGITAL ASSISTANT kaas oo barnaamij kaa caawinaya inaad cod ku raadin karta wax kasta .
Taleefanad waxa la saadaalinayaa inay yeelan doonaan suuq xoogan ka dib dib u dhac soo wajahay shirkadda sumsung sanadkii hore laakin taleefadan ayaa ah kuwa laga doorbido karo iphone 7 .
Previous PostNoocyada saxarada iyo waxa ay ka dhigan yihiin Next PostAdiga iyo Maskaxdaadu Ma istaqaanaan?